အဆိုတော် အမွန်းနဲ့ ကားအကြောင်း စကားစမြည် | CarsDB
အဆိုတော် အမွန်းနဲ့ ကားအကြောင်း စကားစမြည်
1. အခုလတ်တလော အနုပညာလုပ်ငန်းတွေက
Automatic DVD album ထွက်တော့မှာမို့အဲဒါအတွက် အပြီးသတ်ပြင်ဆင်နေတယ်။ လက်ခံထားတဲ့ show ပွဲတွေဖျော်ဖြေဖြစ်တယ်။ magazine, journal interview တွေ ဓါတ်ပုံရိုက်ကူးရေးတွေ လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
2. လက်ရှိစီးနေတဲ့ ကားက
လက်ရှိ စီးနေတာ Honda Insight ပါ ။
3. စီးဖူးသမျှထဲမှာ အကြိုက်ဆုံးကားက
မှတ်မှတ်ရရ LA မှာ BMW အမိုးဖွင့်ပြိုင်ကားလေးမောင်းဖြစ်တာလေး သဘောတွေ့ ခဲ့ဖူးတယ် ။ အကြိုက်ဆုံးရယ်လို့ တော့မပြောတတ်ဘူး။ ဘီးလေးဘီးပါပြီး Aircon ကောင်း Engine ကောင်း ရင် အမွန်းအတွက် အလုပ်ဖြစ်တယ်။
4. ဘယ်လိုကားမျိုးကို စီးကြည့်ချင်သေးလဲ
အခုစီးနေတာ Honda ။ ဒါပေမယ့် Toyota စီးကြည့်ချင်သေးတယ်။ တခြားအမျိုးအစားတွေရောပေါ့။ သူ့ ဟာနဲ့ သူတော့ကောင်းကြမယ်
5. ကိုယ်တိုင်မောင်းတာကြိုက်လား။ ဘေးက ထိုင်စီးရတာ ကြိုက်လား
မရှည်လို့ ။ လမ်းကြောင်းရွေးတာကအစပေါ့။ ကိုယ့်အလုပ်နဲ့ ကိုယ်ပဲစဉ်းစားရင်းမောင်ဖြစ်တာများတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ အမွန်းကားကိုမောင်းတာဆိုလို့ အမွန်းမောင်လေးနှစ်ယောက်ရယ် အရမ်းချစ်တဲ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရယ်ပဲရှိမယ်။
6. မြန်မာနိုင်ငံမှာ မောင်းရတာနဲ့ LA မှာ မောင်းရတာ ဘာကွာခြားမှု ရှိလဲ
ထိုင်ခုံ ဘယ်မောင်းနဲ့ ညာမောင်းကွာပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာက ညာဖက်ထိုင်မောင်းတာများတယ်။ အမေရိကမှာက ဘယ်ဖက် ထိုင်မောင်းတာပါ။ ကားလမ်းကို ညာကပ်မောင်းတာချင်းတော့ တူပါတယ်။ အမွန်း မြန်မာနိုင်ငံမှာပဲကားမောင်းများတာပါ။ LA မှာ GPS ကြည့်ပြီးမောင်းရလောက်အောင် အနေမများပါဘူး။ အလုပ်အတွက်ပဲသွားတာ။ အဲဒီရောက်ရင် မန်နေဂျာပဲမောင်းပို့ တယ်။ ပြီးတော့ Uber လို့ခေါ်တဲ့ အငှားကားတွေ စီးတာများတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ တော့ ရိုက်ကူးရေးအတွက် အမွန်းမောင်းတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေ သောက်ထားပြီး ကိုယ်က မသောက်ထားတာနဲ့ ကြုံ ရင်ဖြစ်ဖြစ် မောင်းပေးတယ် ။ သူတို့ဆီမှာ နဲနဲပဲသောက်ထားဦးတော့ ရဲမိပြီဆိုတာနဲ့ မြန်မာငွေ သိန်းတစ်ရာလောက် ဒဏ်ငွေဆောင်ရပြီလေ။ သောက်ပြီးရင်မမောင်းရဲကြဘူး။
7. ကား Fashion နဲ့ ပက်သက်ပြီး အမြင်လေး သိပါရစေ
ဟီး... ကား Fashion ကို အမွန်းထက်တခြားလူငယ်တွေ ပိုသိပါလိမ့်မယ်။ အမွန်းရဲ့ ကားကို ကြည့်လိုက်ရင် ဖုန်တက်နေတာများလိမ့်မယ် ( ဟားဟား) Sticker ကပ်ရတာဝါသနာမပါဘူး ။မီးဆင်ထားတဲ့ကားမြင်ရင် ဘုရားပွဲလှည့်နေသလို ခံစားရတယ် ။ဘယ်သူ့ ကိုမှမရည်ရွယ်ပါနော်! သူ့ အကြိုက်နဲ့ သူပဲမို့ လေ။ ကြိုက်တဲ့ သူတွေ အလှဆင်ကြတာကောင်းပါတယ် ။အမွန်းကတော့ ကားဆိုရင် အရှိအတိုင်းကို Polish တင်တာလောက်ကလွဲပြီး ဘာမှမလုပ်ြဖစ်ဘူး။
8. CarsDB အတွက် အမှတ်တရ စကားလေး
CarsDB က မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပထမဆုံး နဲ့ ကားအရောင်းအဝယ်အများဆုံး Site လို့ သိရပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ဂုဏ်ယူပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီးတော့ ရောင်းသူနဲ့ ဝယ်သူကြားမှာ အကောင်းဆုံးသော ဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနိုင်တဲ့ အားထားရတဲ့ site အဖြစ် ထာဝရ တည်တံ့ပါစေရှင့်!
ယခုလို မေးသမျှ မေးခွန်များအား အချိန်ပေးပြီး သေချာဖြေဆိုပေးသွားပါသော နိုင်ငံကျော် အဆိုတော် အမွန်းကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
1. အခုလတျတလော အနုပညာလုပျငနျးတှကေ
Automatic DVD album ထှကျတော့မှာမို့အဲဒါအတှကျ အပွီးသတျပွငျဆငျနတေယျ။ လကျခံထားတဲ့ show ပှဲတှဖြေျောဖွဖွေဈတယျ။ magazine, journal interview တှေ ဓါတျပုံရိုကျကူးရေးတှေ လုပျဖွဈပါတယျ။
2. လကျရှိစီးနတေဲ့ ကားက
လကျရှိ စီးနတော Honda Insight ပါ ။
3. စီးဖူးသမြှထဲမှာ အကွိုကျဆုံးကားက
မှတျမှတျရရ LA မှာ BMW အမိုးဖှငျ့ပွိုငျကားလေးမောငျးဖွဈတာလေး သဘောတှေ့ ခဲ့ဖူးတယျ ။ အကွိုကျဆုံးရယျလို့ တော့မပွောတတျဘူး။ ဘီးလေးဘီးပါပွီး Aircon ကောငျး Engine ကောငျး ရငျ အမှနျးအတှကျ အလုပျဖွဈတယျ။
4. ဘယျလိုကားမြိုးကို စီးကွညျ့ခငျြသေးလဲ
အခုစီးနတော Honda ။ ဒါပမေယျ့ Toyota စီးကွညျ့ခငျြသေးတယျ။ တခွားအမြိုးအစားတှရေောပေါ့။ သူ့ ဟာနဲ့ သူတော့ကောငျးကွမယျ
5. ကိုယျတိုငျမောငျးတာကွိုကျလား။ ဘေးက ထိုငျစီးရတာ ကွိုကျလား
မရှညျလို့ ။ လမျးကွောငျးရှေးတာကအစပေါ့။ ကိုယျ့အလုပျနဲ့ ကိုယျပဲစဉျးစားရငျးမောငျဖွဈတာမြားတယျ။ တဈခါတဈလေ အမှနျးကားကိုမောငျးတာဆိုလို့ အမှနျးမောငျလေးနှဈယောကျရယျ အရမျးခဈြတဲ့သူငယျခငျြးတဈယောကျရယျပဲရှိမယျ။
6. မွနျမာနိုငျငံမှာ မောငျးရတာနဲ့ LA မှာ မောငျးရတာ ဘာကှာခွားမှု ရှိလဲ
ထိုငျခုံ ဘယျမောငျးနဲ့ ညာမောငျးကှာပါတယျ။ မွနျမာနိုငျငံမှာက ညာဖကျထိုငျမောငျးတာမြားတယျ။ အမရေိကမှာက ဘယျဖကျ ထိုငျမောငျးတာပါ။ ကားလမျးကို ညာကပျမောငျးတာခငျြးတော့ တူပါတယျ။ အမှနျး မွနျမာနိုငျငံမှာပဲကားမောငျးမြားတာပါ။ LA မှာ GPS ကွညျ့ပွီးမောငျးရလောကျအောငျ အနမေမြားပါဘူး။ အလုပျအတှကျပဲသှားတာ။ အဲဒီရောကျရငျ မနျနဂြောပဲမောငျးပို့ တယျ။ ပွီးတော့ Uber လို့ချေါတဲ့ အငှားကားတှေ စီးတာမြားတယျ။ တဈခါတဈလေ တော့ ရိုကျကူးရေးအတှကျ အမှနျးမောငျးတယျ။ သူငယျခငျြးတှေ သောကျထားပွီး ကိုယျက မသောကျထားတာနဲ့ ကွုံ ရငျဖွဈဖွဈ မောငျးပေးတယျ ။ သူတို့ဆီမှာ နဲနဲပဲသောကျထားဦးတော့ ရဲမိပွီဆိုတာနဲ့ မွနျမာငှေ သိနျးတဈရာလောကျ ဒဏျငှဆေောငျရပွီလေ။ သောကျပွီးရငျမမောငျးရဲကွဘူး။
7. ကား Fashion နဲ့ ပကျသကျပွီး အမွငျလေး သိပါရစေ
ဟီး... ကား Fashion ကို အမှနျးထကျတခွားလူငယျတှေ ပိုသိပါလိမျ့မယျ။ အမှနျးရဲ့ ကားကို ကွညျ့လိုကျရငျ ဖုနျတကျနတောမြားလိမျ့မယျ ( ဟားဟား) Sticker ကပျရတာဝါသနာမပါဘူး ။မီးဆငျထားတဲ့ကားမွငျရငျ ဘုရားပှဲလှညျ့နသေလို ခံစားရတယျ ။ဘယျသူ့ ကိုမှမရညျရှယျပါနျော! သူ့ အကွိုကျနဲ့ သူပဲမို့ လေ။ ကွိုကျတဲ့ သူတှေ အလှဆငျကွတာကောငျးပါတယျ ။အမှနျးကတော့ ကားဆိုရငျ အရှိအတိုငျးကို Polish တငျတာလောကျကလှဲပွီး ဘာမှမလုပျွဖဈဘူး။
8. CarsDB အတှကျ အမှတျတရ စကားလေး
CarsDB က မွနျမာနိုငျငံရဲ့ ပထမဆုံး နဲ့ ကားအရောငျးအဝယျအမြားဆုံး Site လို့ သိရပါတယျ။ အဲဒီအတှကျ ဂုဏျယူပါတယျ။ ဆကျလကျပွီးတော့ ရောငျးသူနဲ့ ဝယျသူကွားမှာ အကောငျးဆုံးသော ဝနျဆောငျမှုတှပေေးနိုငျတဲ့ အားထားရတဲ့ site အဖွဈ ထာဝရ တညျတံ့ပါစရှေငျ့!
ယခုလို မေးသမြှ မေးခှနျမြားအား အခြိနျပေးပွီး သခြောဖွဆေိုပေးသှားပါသော နိုငျငံကြျော အဆိုတျော အမှနျးကို အထူးကြေးဇူးတငျပါတယျ ခငျဗြာ။
Posted at: 22-04-2016 11:22 AM
ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း ၁၁ လအတွင်း...
Zawgyi Version ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း ယခုနှစ်​ ဇန်​န၀ါရီလကနေ နိုဝင်​ဘာလ အထိ လိုင်စင်မဲ့ကားအစီး​ရေ ၁၂၀ စီး​ကျော်​ စစ်​​ဆေးဖမ်းဆီးရမိခဲ့ရာ...
မြို့တွင်း ၆ မြို့နယ်​တွင်​ smart parking ကဒ်​...
Zawgyi Version ရန်​ကုန်​မြို့တွင်း ၆ မြို့နယ်​အတွင်းယာဉ်​ရပ်​နားခများ​ကောက်​ခံခြင်းကို ​အောက်​တိုဘာလ ၁ ရက်​တွင်...
Zawgyi Version လာမည့်​ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ စာသင်​နှစ်​ကစ၍ ​ ​​ကျောင်းကားအဖြစ်​ ဝင်ေ​​ရာက်​ပြေးဆွဲမည့်​ကားများ ​အားလုံးလုပ်​ငန်းလိုင်​စင်...
ရန်​ကုန်​လိုင်​စင်​ လက်​မှတ်​ သိန်း၉၀...
ရန်​ကုန်​လိုင်​စင်​ လက်​မှတ်​ သိန်း၉၀ ဖြင့်​ရောင်းချခွင့်ပြု​ရန်​တင်​ပြထား​သော်​လည်း ရန်​ကုန်​တွင်​ နယ်လိုင်​စင်​ကားများသွားလာမှု...
ရန်ကုန်မိုးပျံအမြန်လမ်း စီမံကိန်း အတွက် ကုမ္မဏီ...
Zawgyi Version ရန်ကုန်မိုးပျံ အမြန်လမ်း စီမံကိန်း (YEX) Phase-I အတွက် ဆန်ခါတင်အရည်အသွေး ပြည့်မီသည့် ကုမ္ပဏီ (၁၀)ခုအား...